Nantsi isikhokelo malunga nendlela yokwenza ikharityhulam yeklasi ye-ESL ukuqinisekisa ukuba abafundi bakho bahlangabezana neenjongo zabo zokufunda. Ngokuqinisekileyo, ukucwangcisa ikharityhulam yeklasi elitsha le-ESL / EFL linokuba ngumngeni. Lo msebenzi unokuba lula ngokulandela le migaqo-siseko. Okokuqala nangakumbi, ootitshala kufuneka bahlale beqhuba uhlalutyo lweemfuno zabafundi ukwenzela ukuba baqinisekise ukuba uyazi ukuba zeziphi izinto zokufunda eziya kuba zifanelekile eklasini lakho.
Indlela yokudala iKharityhulam yeKharityhulam
Ukuvavanya amanqanaba okufunda abafundi - ngaba bafana okanye baxutywe? Unga:
Nika uvavanyo oluqhelekileyo lwegrama.
Hlela abafundi kumaqela amancinci kwaye unikeze 'umsebenzi wokukwazi.' Nika ingqalelo ngokukhawuleza ukuba ngubani okhokela iqela kwaye obunzima.
Buza abafundi ukuba bazenzele. Emva kokugqiba, cela umfundi ngamnye imibuzo embalwa yokulandelelana ukuze abone indlela abaphatha ngayo intetho ye-impromptu.
Ukuphonononga ukubunjwa kobuzwe beklasini - ngaba bonke bavela kwilizwe elifanayo okanye kwiqela elizwe lonke?
Ukuseka iinjongo eziphambili ngokusekelwe kwiinjongo zokufunda zesikolo jikelele.
Phanda iindlela ezahlukeneyo zokufunda zabafundi - luhlobo luni lokufunda oluziva lukhululekile?
Fumana ukuba kubaluleke kangakanani uhlobo oluthile lwesiNgesi (oko kukuthi iBritish okanye i-American, njl.
Buza abafundi ukuba baqonda ntoni kubaluleke kakhulu malunga namava okufunda.
Ukuseka iinjongo zekharityhulam ezingaphezulu kweklasi (okt bafuna isiNgesi kuphela ngokuhamba?).
Izixhobo zokufunda isiNgesi kwiimpawu zesigama ezihlangabezana neemfuno zabafundi. Umzekelo, ukuba abafundi baceba ukuya kwiyunivesithi, gxininisa ekwakheni isigama lesikolo. Ngakolunye uhlangothi, ukuba abafundi beyabo bayingxenye yenkampani, izinto zophando ezihlobene nomsebenzi wazo .
Khuthaza abafundi ukuba banikeze imizekelo yezixhobo zokufunda zesiNgesi ezithandayo.
Njengeklasi, xubusha ngoluphi uhlobo lwabafundi beendaba abaziveleyo beziva bekhululekile. Ukuba ngaba abafundi bengasetyenziswanga ukufunda, unokufuna ukugxila ekusebenziseni izinto zevidiyo ezisekhompyutheni.
Thatha ixesha lokuphanda ukuba zeziphi izinto zokufundisa ezikhoyo ukuhlangabezana nale njongo. Ngaba ziyahlangabezana neemfuno zakho? Ngaba ulinganiselwe ukhetho lwakho? Luhlobo luni lokufikelela okufuneka usebenzise 'izinto eziyimfuneko'?
Yiba neengqiqo uze unqumle iinjongo zakho emva kwe-30% - unako ukwandisa njengoko iklasi iyaqhubeka.
Ukuseka inani leenjongo eziphakathi.
Xoxa ngeenjongo zakho zokufunda kwiiklasi. Unokwenza oku ngokubonelela ngekharityhulam eprintiweyo. Nangona kunjalo, gcina ikharityhulam yakho ngokubanzi kwaye ushiye indawo yokutshintsha.
Vumela abafundi baqonde indlela abaqhuba ngayo kangangokuba akukho mangalisa!
Njalo ulungele ukutshintsha iinjongo zakho zekharityhulam ngexesha lakho.
Iingcebiso zeCandelo leKharityhulam
Ukuba nemephu apho ufuna ukuya khona kunokunceda ngokwenene kwimibandela enjengefuthe, ukucwangcisa isifundo kunye nokwaneliseka kweklasi jikelele.
Nangona kukho isidingo sekharityhulam, qiniseka ukuba ukufikelela kweenjongo zokufunda kwikharityhulam akubalulekanga ngakumbi kunokuba kufundwa oko kuza kuqhubeka.
Ixesha elichithwe ukucinga malunga nale micimbi yintalo-mali enobungcali obuza kuzihlawula ngokuphindaphindiweyo ngokuphindaphindiweyo kungekuphela kwenkqubo yokwaneliseka, kodwa nangokwexesha lokugcina.
Khumbula ukuba iklasi nganye iyahluke- nangona ibonakala ifana.
Thatha umdla wakho kwaye ujolise ingqwalasela. Xa ujonge ngakumbi ukufundisa iklasi, abafundi abaninzi baya kukulungele ukulandela ukukhokela kwakho.
I-Ant kunye neNdova
Konke malunga neNkqubo eHlangeneyo eHlangeneyo (AIM) yokufundisa
Ukuqwalaselwa kwegrama ngokusebenzisa i-Auction Sentence
Kutheni iHiragana "Wa" Ngaba ngamanye amaxesha kubhalwe njengeHiragana "Ha"
Ubomi beWu Zetian
"Lascia ch'io pianga" Iingoma kunye nokuguqulelwa kwimixholo
9 Impumelelo yeTshayina yamandulo
Imbali yeMihlaba yeMihlaba yangaphandle
Imisebenzi Eyona Imisebenzi Eyona Ngcono KwabaTitshala Abadala
Izinto ezi-8 zokumazi nge-Gymnast u-Alicia Sacramone Quinn
I-Silk Road Izinto zokusebenza
Iingcebiso ezi-10 eziphezulu zokupasa i-AP ye-US History Exam
Iindlela ezine zokulinganisa iSapho kunye neSikolo se-Inthanethi